Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): March 2012
Mung masa sumtsaw matut+++
Tai ni gaw laknak kaba n-gun, hpyen masha n-gun hte sha myit n dik dum nna, byin dik ai shanhteashare shagan tsu numla ni hpe bai woi lung wa ai sha n-ga, tsadan bungli chye galaw ai tsadan mayam ni hpe mung woi lung wa rai, Kachin hpe n dang dang hkra shakri na hku galaw nga ma ai da. KK gaw , nbungeshapoi kau ai mahkaw zawn shapoi kau ya u ga.Chyaru lu ai ni kaw chyawm me grai shang mai ai re da. Dai she kyu grau bai hpyi ra sai. Shawnglamamatu Myu Shayi ni 30 ya shani kaw na lusha ni shagun jaw nga saga ai.
Daini na Ga shagawp Mungmasa Sum Tsaw (Myen) hpumdim dat dat sai yaw.
Kachin refugees in Burma struggle for independence -Video
at 3/30/2012 01:51:00 PM
BBC news Video click on link
Ethnic Kachin people in Burma have been struggling for independence and the right to their own language and religion for more than halfacentury.
Recent political changes in Burma could pave the way for democratic change for some, but for most refugees living in camps in the so-called Kachin State, the fight continues.
ကွားဖွတျရှေးကောကျပှဲ ဘာတှေ မြှျောလငျ့ကွလဲ
at 3/29/2012 10:10:00 AM
မီဒီယာ ပလေးယား Click on media link
ဧပွီလ ၁ ရကျနေ့ ကငျြးပမယျ့ ကွားဖွတျရှေးကောကျပှဲဟာ ထူးခွားတဲ့ ရှေးကောကျပှဲ ဖွဈသလို နိုငျငံတကာက အကဲခတျတှေ လာရောကျ အကဲခတျကွမှာလညျး ဖွဈပါတယျ။
ဒီတော့ သောတရှငျတို့အနနေဲ့ ဒီရှေးကောကျပှဲကနေ ဘာတှေ မြှျောလငျ့ကွပါသလဲ
Tsin yam ni hpe kawan ai lam
at 3/29/2012 09:13:00 AM
San htai lamang RVA
Hpyen Yen ni hpe sa garum ya nga ai Catholic Hpung na Jau,Bro, Sara ni hte san htai galaw ai.
Click and Download+++
KACHIN PROGRAM 25 MARCH 2012 AM.PM
Laiza Catholic nawku hpung Wa Jau Nbwi hte wa hkrum ai aten. Wa Jau mung shi buga hpung kata byin nga ai re majaw hpyen yen lanawn lakawn lamang hta grai shakut nga ai.
Kachin Independence Organizatiion's War against Drugs in Northern Burma:
at 3/29/2012 08:57:00 AM
Kachin Independence Organizatiion's War against Drugs in Northern Burma: Destroying opium poppy fields in Kachin state. The vast majority of this year's opium crop in Kachin state was grown in territory controlled by the government, according to ...
Mungmasa sumtsaw matut 6(3)
at 3/29/2012 08:52:00 AM
Hkawp myit rum manang ni,
Talogyi maga de, Tai Hpyenla ni 100 daram , KIA hpyenhkying lang nna, shamu shamawt hkawm nga ma ai lam ( shat hpyi sha hkawm ai lam ) ni na lu ai. Daini na ga shagawp mani na Mungmasa sumtsaw matut3re yaw.
JIC: Read more++click on+++
ရှေးကောကျပှဲကို ကအေိုငျအို နှောငျ့ယှကျမှာ မဟုတျ
at 3/29/2012 08:51:00 AM
ကအေိုငျအနေဲ့ အကွိမျကွိမျ ဆှေးနှေးပမေဲ့ ပွလေညျမှု မရသေး
ကအေိုငျအို ကခငျြလှတျလပျရေး အဖှဲ့အနနေဲ့ ရှေးကောကျပှဲကို နှောငျ့ယှကျမှာ မဟုတျကွောငျး လိုအပျတဲ့ အကူအညီတှပေေးမှာ ဖွဈကွောငျး ထုတျဖျောပွောဆိုပါတယျ။
NLD အမြိုးသား ဒီမိုကရစေီ အဖှဲ့ခြုပျကလညျး ကအေိုငျအိုနဲ့ တှခေ့ငျြကွောငျး ကမျးလှမျးထားတာရှိပွီး ကအေိုငျအိုဘကျကလညျး တှဆေုံ့ဖို့ ဆန်ဒရှိကွောငျးလညျး ပွောပါတယျ။
ရှေးကောကျပှဲ ကိစ်စ အတှကျသာမက ကနျြတဲ့ နိုငျငံရေး ကိစ်စတှေ ဆှေးနှေးဖို့အတှကျပါ တှဆေုံ့ခငျြတဲ့ ဆန်ဒရှိကွောငျးပွောပါတယျ။
အစိုးရကတော့ မိုးကောငျး၊ ဖားကနျ့၊ ဗနျးမျောမွို့တှမှော လုံခွုံရေးကွောငျ့ ရှေးကောကျပှဲ ဆိုငျးငံ့ထားမယျလို့ ဆိုပါတယျ။
ကအေိုငျအေ ဒုတိယ စဈဉီးစီးခြုပျ ဗိုလျမှူးခြုပျဂှမျမျော ကတော့ မိုးကောငျး၊ ဗနျးမျော၊ ဖားကနျ့မွို့တှပေျေါက မဲရုံနရောတှဟော တိုကျပှဲ ဖွဈပှားရာ နရောတှနေဲ့ မနီးကွောငျး ပွောပါတယျ။
အစိုးရဘကျကလညျး အဲဒီဒသေတှရေဲ့ လုံခွုံရေး အတှကျ သူတို့နဲ့ ဆှေးနှေးဖူးတာမရှိကွောငျးလညျး ပွောပါတယျ။
သူတို့ ကအေိုငျအအေနနေဲ့ ရှေးကောကျပှဲကို နှောငျ့ယှကျဖို့ သဘောထားမရှိကွောငျး ၂၀၁၀ ရှေးကောကျပှဲတုနျးကလညျး အကူအညီပေးခဲ့ဖူးတာတှေ ရှိကွောငျး ပွောပါတယျ။
at 3/27/2012 11:08:00 AM
၎င်းငျးကိုပွငျဆငျရနျ (ဝါ) ပွညျထောငျစု အခွခေံဥပဒေ ရေးဆှဲရနျ ပွညျသူ့လှတျတျော ပါလီမနျ အစညျးအဝေးက (၁၉၆၀) ပွညျ့နှဈ နိုဝငျဘာ (၁၀) ရကျနတှေ့ငျ အဖှဲ့ဝငျ (၂၉) ဦးပါသော အခွခေံဥပဒပွေငျဆငျရေးကျောမတီကို ဥပဒအေရ နိုငျငံတျော သမ်မတက ဖှဲ့စညျးပေးခဲ့သညျ။ အခွခေံဥပဒေ ပွငျဆငျရေး ကျောမတီ၏ တာဝနျ (၃) ရပျကိုလညျး ခမြှတျပေးခဲ့သညျ။
စုပေါငျးညှိနှိုငျးဆှေးနှေးပွီး ပွငျဆငျရနျကွိုးပမျးနသေညျ့ အခြိနျကာလမှာပငျ ဗိုလျနဝေငျး စဈအုပျစုက (၁၉၆၂) ခုနှဈတှငျ စဈအာဏာသိမျးကာ ပွညျထောငျစုကို ဖကျြဆီးခဲ့သညျ။ ဗိုလျနဝေငျး၏ (၁၉၇၄) ခုနှဈ မဆလ ပွညျထောငျစု အခွခေံ ဥပဒနှေငျ့ ယခု ဗိုလျသနျးရှေ၏ (၂၀၀၈) ခုနှဈ နအဖ ပွညျထောငျစုအခွခေံဥပဒမှောလညျး အတူတူနှငျ့အနူနူပငျဖွဈသညျ။အဘယျကွောငျ့ နညျး။ ဗိုလျနဝေငျး၏ (၁၉၇၄) ခုနှဈ အခွခေံဥပဒပေုဒျမ (၃၁) အရနှငျ့ ဗိုလျသနျးရှေ၏ (၂၀၀၈) ခုနှဈ အခွခေံဥပဒပေုဒျမ (၄၉) အရ- တိုငျးဒသေကွီး (၇) ခုနှငျ့ ပွညျနယျ (၇) ခု ပိုငျးခွားသတျမှတျခကျြမှာ တထပျတညျးတူနကွေ၍ဖွဈပါသညျ။ အားလုံး တဈပွညျထောငျ ဖှဲ့စညျးပုံ အခွခေံ ဥပဒခေညျြး ဖွဈနသေောကွောငျ့ပငျတညျး။ မညျသညျ့ စဈအာဏာရှငျ စနဈကမြှ ပွညျထောငျစုကို လုံးဝမလိုလားကွောငျး တိုငျးရငျးသားအားလုံးက သိနှငျ့နကွေပွီးဖွဈသညျ။
(၁၉၇၄) ခုနှဈ အခွခေံ ဥပဒထေကျ ပိုဆိုးသညျက (၂၀၀၈) ခုနှဈ တဈပွညျထောငျ ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံ ဥပဒတှေငျ ဒသေဆိုငျရာ ကိုယျပိုငျအုပျခြုပျရေး ပုဒျမမြားကို ပွဋ်ဌာနျးလာသညျ။ ဥပဒနေောကျထပျတိုး၍ ကွောကျစရာကောငျးလောကျအောငျ (Divide and rule) ခှဲခွား ဖိနှိပျရနျပွဋ်ဌာနျးလာသောကွောငျ့ ဖွဈသညျ။ အကောငျးဘကျကို ဦးတညျသလော၊ အဆိုးဘကျကို ဦးတညျရှရှေု့နပေါသလော၊ ဆနျးစဈသုံးသပျရပါမညျ။
(၂၀၀၈) အခွခေံဥပဒေ ပုဒျမ (၅၆) တှငျ ကိုယျပိုငျအုပျခြုပျခှငျ့ရတိုငျးနှငျ့ ကိုယျပိုငျအုပျခြုပျခှငျ့ရဒသေမြားကို အောကျပါအတိုငျး သတျမှတျသညျ။
(က) စဈကိုငျးတိုငျးရှိ လရှေီးမွို့နယျ၊ လဟယျမွို့နယျနှငျ့ နနျးယှနျးမွို့နယျတို့ကို စုစညျးပွီး နာဂ ကိုယျပိုငျအုပျခြုပျခှငျ့ရဒသေ၊
(ခ) ရှမျးပွညျနယျရှိ ရှာငံမွို့နယျနှငျ့ ပငျးတယမွို့နယျ တို့ကို စုစညျးပွီး ဓနု ကိုယျပိုငျအုပျခြုပျခှငျ့ရ ဒသေ၊
(ဂ) ရှမျးပွညျနယျရှိ ဟိုပုနျးမွို့နယျ၊ ဆီဆိုငျမွို့နယျနှငျ့ ပငျလောငျးမွို့နယျ တို့ကို စုစညျးပွီး ပအိုဝျး ကိုယျပိုငျအုပျခြုပျခှငျ့ရဒသေ
(ဃ) ရှမျးပွညျနယျရှိ နမျ့ဆနျမွို့နယျနှငျ့ မနျတုံမွို့နယျ တို့ကို စုစညျးပွီး ပလောငျ ကိုယျပိုငျအုပျခြုပျခှငျ့ရဒသေ၊
(င) ရှမျးပွညျနယျရှိ ကုနျးကွမျးမွို့နယျနှငျ့ လောကျကိုငျမွို့နယျ တို့ကိုစုစညျးပွီး ကိုးကနျ့ ကိုယျပိုငျအုပျခြုပျခှငျ့ရဒသေ၊
(စ) ရှမျးပွညျနယျရှိ ဟိုပနျမွို့နယျ၊ မိုငျးမောမွို့နယျ၊ ပနျဝိုငျမွို့နယျ၊ နားဖနျးမွို့နယျ၊ မကျမနျးမွို့နယျနှငျ့ ပနျဆနျး (ပနျးခမျး) မွို့နယျ ခွောကျမွို့နယျ တို့ကို ခရိုငျ နှဈခရိုငျ ဖှဲ့ပွီး “၀” ကိုယျပိုငျအုပျခြုပျခှငျ့ရတိုငျး ဟုဖျောပွထားသညျ။
တိုငျးဒသေကွီး လှတျတျော သို့မဟုတျ ပွညျနယျ လှတျတျော ဖှဲ့စညျးခွငျး။ ပုဒျမ (၁၆၁) (ဃ) တှငျ ပုဒျမခှဲ (က) နှငျ့ (ခ) သို့မ ဟုတျ ပုဒျမခှဲ (က) နှငျ့ (ဂ) တို့အရ ရှေးကောကျတငျမွှောကျသညျ့ လှတျတျောကိုယျစားလှယျ စုစုပေါငျး၏ သုံးပုံတပုံ နှငျ့ညီမြှသော တပျမတျော ကာကှယျရေး ဦးစီးခြုပျက ဥပဒနှေငျ့အညီ အမညျစာရငျးတငျသှငျးသညျ့ တပျမတျောသား တိုငျးဒသေကွီး သို့မ ဟုတျ ပွညျနယျလှတျတျောကိုယျစားလှယျမြား။
ဟုဖျောပွထားသညျ။ စဈတပျမှ သုံးပုံတဈပုံ (၂၅% ထကျမြား) နရောယူထားသညျ။
တိုငျးဒသေကွီး သို့မဟုတျ ပွညျနယျ ၀နျကွီးခြုပျ ခနျ့အပျတာဝနျပေးခွငျး ပုဒျမ (၂၆၁) (ဃ) တှငျ နိုငျငံတျော သမ်မတက အမညျ စာရငျးတငျသှငျးသညျ့ လှတျတျောကိုယျစားလှယျအား တိုငျးဒသေကွီး သို့မဟုတျ ပွညျနယျ ၀နျကွီးခြုပျအဖွဈ ခနျ့အပျတာဝနျပေးရနျ ငွငျးပယျခှငျ့မရှိစရေ ဟုပွဋ်ဌာနျးထားသညျ။ (၂၀၀၈) ဖှဲ့စညျးပုံ အခွခေံဥပဒပေုဒျမ (၄၉) အရ တိုငျးဒသေကွီး (၇) ခုသတျမှတျ ထားသဖွငျ့ ပုဒျမ (၂၆၁) (ဃ) အရ တိုငျးဒသေကွီး ၀နျကွီးခြုပျ (၇) ဦးကို သမ်မတက ခနျ့အပျထားပါသညျ။ လကျရှိသမ်မတ ဦးသိနျးစိနျ က ယခုတလော ပွောဆိုဖှငျ့ဟလာပါသညျ။ ဗမာလညျးတိုငျးရငျးသားလူမြိုးတမြိုး ဖွဈသညျကို ယခုမှ ဘာကွောငျ့ ပွောပါ သလဲ။ လူမြိုးတမြိုး (ဝါ) ပွညျနယျဝနျကွီးခြုပျတဦး ခနျ့အပျထားသညျ့ကာလတှငျ ဗမာလူမြိုးတမြိုး (ဝါ) ဗမာပွညျနယျဖှဲ့စညျးပုံ ဗမာဝနျကွီးခြုပျတဈဦးကိုသာ ခနျ့ထားခငျြ၍လော။ သို့ဆိုပါလြှငျ ၀နျကွီးခြုပျ (၆) ဦးနရောနှငျ့ ဌာနအတှကျ တိုငျးပွညျကပေးနေ ရသညျ့ လစာငှေ သိနျးပေါငျးမွောကျမွားစှာ သကျသာသှားဖှယျရာရှိပါသညျ။ ဆငျးရဲမှဲတမှေု ကဆြငျးအောငျလုပျရာလညျး ရောကျပါမညျ။ ဗမာပွညျနယျကို သမ်မတ ဦးသိနျးစိနျ ဖှဲ့စညျးဝံ့ပါမညျလော။ လူမြိုးစုတိုငျး၏ တနျးတူရေးကို လကျတှေ့ အကောငျ အထညျဖျောဝံ့ပါမညျလော။ ပွညျထောငျစုစဈစဈကို လိုလား လြှငျ၊ နိုငျငံ၏ ထာဝရ ငွိမျးခမျြးရေးကို လိုလားလြှငျ လကျတှလေု့ပျ ရဲ ကိုငျရဲရှိရပါမညျ။ ဗမာအပါအဝငျ တိုငျးရငျးသားလူမြိုးပေါငျးစုံက နိုငျငံရေးအရ အာရုံစိုကျနကွေလပွေီ။
ဥပဒပွေုခှငျ့ အာဏာနှငျ့ ပတျသကျ၍ ပုဒျမ (၁၉၆) တှငျ ကိုယျပိုငျအုပျခြုပျခှငျ့ရတိုငျး သို့မဟုတျ ကိုယျပိုငျအုပျခြုပျခှငျ့ရဒသေ ဦးစီးအဖှဲ့မြားအား မိမိတို့တိုငျး သို့မဟုတျ ဒသေအတှကျ ဇယား (၃) တှငျ ဖျောပွထားသော ဥပဒပွေု စာရငျးပါ ကိစ်စရပျမြားနှငျ့ စပျလဉျြးသညျ့ ဥပဒပွေုခှငျ့ အာဏာမြားကို ခှဲဝအေပျနှငျးသညျ ဟုဖျောပွသညျ။ ဇယား (၃) တှငျ ဥပဒပွေု စာရငျးကို အောကျပါ အတိုငျး တှရှေိ့ရသညျ။
(၁) မွို့ပွနှငျ့ ကြေးရှာ စီမံကိနျးမြား။
(၂) လမျးတံတားမြား ဖောကျလုပျ၊ တညျဆောကျ၊ ပွုပွငျထိနျးသိမျးရေး၊
(၃) ပွညျသူ့ ကနျြးမာရေး၊
(၅) မီးဘေး အန်တရာယျ ကွိုတငျကာကှယျရေး၊
(၆) စားကကျြမွမြေား ထိနျးသိမျးရေး၊
(၇) သဈတောမြား ကာကှယျထိနျးသိမျးရေး၊
(၈) ပွညျထောငျစုက ပွဋ်ဌာနျးသညျ့ ဥပဒနှေငျ့အညီ သဘာဝ ပတျဝနျးကငျြ ထိနျးသိမျးရေး။
(၉) မွို့နှငျ့ ကြေးရှာမြား အတှငျး ရနှေငျ့လြှပျစဈမီး ဆိုငျရာ ကိစ်စ၊
(၁၀) မွို့မြားနှငျ့ ကြေးရှာမြား၏ စြေးမြားဆိုငျရာ ကိစ်စ ဟုဖျောပွထားသညျ။
အထကျပါ ဥပဒပွေုစာရငျး (၁၀) ခုကိုသာလြှငျ ကိုယျပိုငျအုပျခှငျ့ရ ဒသေမြားဖွဈသော နာဂ၊ ဓနု၊ ပအိုဝျး၊ ပလောငျ၊ ကိုးကနျ့၊ “ဝ” လူမြိုးစုမြား တငျပွခှငျ့ရမညျ။ ဒသေဆိုငျရာ ကိုယျပိုငျအုပျခြုပျခှငျ့မှာ အမြိုးသားလူမြိုးစု အခှငျ့အရေးနှငျ့ ပတျသကျ၍ မညျသညျ့ ပွဋ်ဌာနျး ခကျြကိုမှ ပွဋ်ဌာနျးရနျတငျပွပိုငျခှငျ့မရှိပါ။ လူမြိုးစုမြားအား စဈတပျမှ သုံးပုံတပုံ ကိုယျစားလှယျမြားက အနီးကပျ ဖိနှိပျ ခှဲခွား အုပျခြုပျရနျအတှကျ သီးသနျ့ ပွဋ်ဌာနျးလာခွငျး ဖွဈကွောငျးတှရှေိ့ရပါသညျ။ ကိုးကနျ့ကိုယျပိုငျအုပျခြုပျခှငျ့ရ ဒသေကို ၀ငျရောကျတိုကျခိုကျ သိမျးပိုကျခွငျး က သကျသပွေခဲ့ပွီး ဖွဈသညျ။
ဖှဲ့စညျးပုံ အခွခေံဥပဒတှေငျ ဥပဒပွေုရေးကဏ်ဍ အာဏာခှဲဝရေေးအပိုငျး နှငျ့ပတျသကျ၍ အပဈရပျ လူမြိုးစု လကျနကျကိုငျအဖှဲ့ အစညျး (၁၃) ဖှဲ့ စုပေါငျးပွီး ညောငျနှဈပငျအမြိုးသားညီလာခံသို့ (၂၀၀၅) ခုနှဈ၊ ဖဖေျောဝါရီ (၁၃) ရကျနကေ့ တကျရောကျ တငျပွ ခဲ့ကွသညျ။ တငျပွခဲ့သော အခကျြမြားမှာ-
(၁) ထပျတူ ဥပဒပွေု စာရငျး ထားရှိရေး၊
(၂) အကွှငျးအကနျြ အာဏာကို ပွညျနယျတှငျ ထားရှိရေး၊
(၃) ဥပဒပွေု ကဏ်ဍမှာ တိုငျးရငျးသားလူမြိုးစုကို သီးခွားထားရှိရေး၊
(၄) ပွညျနယျလှတျတျောတှမှော လုံခွုံရေး၊ ကာကှယျရေး ဆိုငျရာ ဥပဒပွေုပိုငျခှငျ့ ရှိရေး၊
(၅) ပွညျနယျလှတျတျောတှမှော စာပေ၊ ယဉျကြေးမှု နှငျ့ပတျသကျပွီး ဥပဒပွေုပိုငျခှငျ့ ရှိရေး၊
(၆) တိုငျးရငျးသားတှရေဲ့ ဓလထေုံ့းတမျး ဥပဒတှေကေို ပွညျနယျတှမှော ဥပဒပွေု ပွဋ်ဌာနျးနိုငျရေးနှငျ့
(၇) ပွညျနယျ ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံ ဥပဒေ သီးခွားရေးဆှဲ ပွဋ်ဌာနျး ကငျြ့သုံးခှငျ့ရှိရေး တို့ဖွဈသညျ။
လူမြိုးစု ခေါငျးဆောငျမြား တရားဝငျ တငျပွခကျြမြားအား တခကျြကိုမြှ လေးစားခွငျးမရှိဘဲ၊ ဥပဒပွေုစာရငျး (၁၀) ခုကိုသာ ဇ ယား (၃) ဖွငျ့ (၂၀၀၈) ဖှဲ့စညျးပုံ အခွခေံဥပဒေ၌ ပွဋ်ဌာနျးလာသညျ။ လူမြိုးစု နယျမွမြေားကို ခှဲခွားလိုကျရုံမြှဖွငျ့ လူမြိုးစုပွဿနာ မြား ပွလေညျသှားပွီဟု လကျခံထားခကျြမှာ အငျမတိအငျမတနျ မှားယှငျးခကျြ ဖွဈပါသညျ။ မညျသညျ့ အမြိုးသား လူမြိုးစုကိုမြှ ကောငျးကြိုး မပေး၍ ဖွဈပါသညျ။
အမြိုးသား ဒသေ ကိုယျပိုငျအုပျခြုပျရေး ဥပဒမြေားနှငျ့ စပျလဉျြးပွီး တပွညျထောငျစနဈကို ကငျြ့သုံးသညျ့ တရုတျပွညျသူ့သမ်မတ နိုငျငံ၏ အမြိုးသား ကိုယျပိုငျအုပျခြုပျရေး ဥပဒကေို လလေ့ာခွငျးအားဖွငျ့ နှိုငျးယှဉျကွညျ့၍ ရနိုငျပါသညျ။ မွနျမာနိုငျငံတှငျ အလိမျအညာ ပွညျထောငျစုအမညျခံသော စဈအာဏာရှငျမြား၏မကျြလှညျ့ပွပှဲ သကျဆိုးမရှညျ နိုငျရနျ ဖျောထုတျပွဖို့ လိုအပျပါသညျ။
အမြိုးသားကိုယျပိုငျအုပျခြုပျရေးဥပဒကေို တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံ ဆဌမ အကွိမျမွောကျပွညျ့သူ့ကှနျဂရကျ၊ ဒုတိယအကွိမျ အစညျးအဝေးက (၁၉၈၄) ခုနှဈ၊ မလေ (၃၁) ရကျနတှေ့ငျ အတညျပွု ပွဋ်ဌာနျးခဲ့သညျ။ သမ်မတ၏ အမိနျ့အမှတျ (၁၃) အရ ထုတျပွနျကွညော၍ (၁၉၈၄) ခုနှဈ၊ အောကျတိုဘာ (၁) ရကျနမှေ့စတငျ ကငျြ့သုံးခဲ့ပါသညျ။ ဥပဒပေါ ပုဒျမ အခြို့ကိုတငျပွပါ သညျ။
ဥပဒေ၏ နိဒါနျးတှငျ – “အမြိုးသား အသီးသီး တနျးတူညီမြှမှု၊ စညျးလုံးညီညှတျမှုနှငျ့ အတူတကှ တိုးတကျ ကွီးပှားစရေေး မူအရ လိုကျနာကငျြ့သုံးရာ၌လညျးကောငျး၊ လူနညျးစု အမြိုးသားမြား၏ အခှငျ့အရေးကို နိုငျငံတျော၏ အပွညျ့အဝ အလေးထားမှုနှငျ့ အာမခံ မှုကို ဒသေဆိုငျရာ အမြိုးသား ကိုယျပိုငျအုပျခြုပျရေးက ဖျောဆောငျသညျ။”
“အမြိုးသား သှေးစညျးရေးကိုထိနျးသိမျးထားရှိရနျ ကွိုးပမျးရာတှငျ လူမြိုးကွီးဝါဒ အဓိကအားဖွငျ့ ဟနျလူမြိုးကွီးဝါဒကို ဆနျ့ကငျြ တိုကျခိုကျသှားရမညျ။ တခြိနျတညျးတှငျ ဒသေန်တရလူမြိုးရေး ဝါဒကိုလညျး ဆနျ့ကငျြတိုကျခိုကျသှားရမညျ။”
“အမြိုးသား အသီးသီး အတူတကှ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေး၊ သှေးစညျးညီညှတျရေးနှငျ့ စညျပငျဝပွောရေးအတှကျလုပျဆောငျရမညျ။” ဟုဖျောပွထားသညျ။
ပုဒျမ (၁)။ ။ တရုတျပွညျသူ့သမ်မတ နိုငျငံတျော၏ ဒသေဆိုငျရာ အမြိုးသား ကိုယျပိုငျအုပျခြုပျရေး ဥပဒသေညျ တရုတျပွညျသူ့ သမ်မတ နိုငျငံတျော ဖှဲ့စညျးအုပျခြုပျပုံ အခွခေံဥပဒအေရ ခမြှတျပွဋ်ဌာနျးထားသော ဥပဒဖွေဈသညျ။
ပုဒျမ (၉)။ ။ နိုငျငံတျော၏အထကျအဆငျ့ အစိုးရအဖှဲ့အစညျးမြားနှငျ့ အမြိုးသားကိုယျပိုငျအုပျခြုပျရေးဒသေမြားရှိ အမြိုးသား ကိုယျပိုငျအုပျခြုပျရေး အစိုးရအဖှဲ့အစညျးမြားသညျ တရုတျပွညျ၏ အမြိုးသားအားလုံး တနျးတူရေး၊ သှေးစညျးရေး၊ အပွနျအ လှနျ ကူညီရေး ဟူသညျ့ ဆိုရှယျလဈဆကျဆံရေး စနဈကို ထိနျးသိမျးစောငျ့ရှောကျ၍ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျစရေမညျ။
မညျသညျ့အမြိုးသားကိုမဆို လူမြိုးခှဲခွားမှုနှငျ့ ဖိနှိပျမှုကို ပိတျပငျထားမွဈရမညျ။ အမြိုးသားသှေးစညျးညီညှတျရေးကို ဖွိုခှဲသညျ့ သို့မဟုတျ အမြိုးသားသှေးကှဲရေးကို လှုံ့ဆျောသညျ့ မညျသညျ့လုပျရပျကိုမဆို ပိတျပငျတားမွဈရမညျ။
ပုဒျမ (၁၀)။ ။ အမြိုးသားကိုယျပိုငျအုပျခြုပျရေး ဒသေမြား၏ ကိုယျပိုငျအုပျခြုပျရေးအစိုးရအဖှဲ့အစညျးမြားသညျ ၎င်းငျးဒသေရှိ အမြိုးသားမြား၏ ကိုယျပိုငျဘာသာစကားကို လှတျလပျစှာရေးသား ပွောဆို အသုံးပွုမှု ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျစရေနျ အာမခံရမညျ။ မိမိ တို့၏ ကိုယျပိုငျရိုးရာ ဓလထေုံ့းတမျးမြားနှငျ့ အစဉျအလာ အမှုအကငျြ့မြားကို လှတျလပျစှာ ထိနျးသိမျးခှငျ့နှငျ့ ပွုပွငျပွောငျးလဲခှငျ့ ရှိရေးကိုလညျး အာမခံရမညျ။
ပုဒျမ (၁၈)။ ။ အမြိုးသားကိုယျပိုငျအုပျခြုပျရေး ဒသေတခု၏ ကိုယျပိုငျအုပျခြုပျရေး အစိုးရအဖှဲ့အစညျးအောကျရှိ ဌာနမြားမှ ကဒေါမြားကို ဖွဈနိုငျသမြှ ၎င်းငျးဒသေရှိ ကိုယျပိုငျအုပျခြုပျရေးကငျြ့သုံးနသေော နိုငျငံသား လူမြိုးစုမြားနှငျ့ အခွားလူနညျးစုအမြိုးသားထဲမှ ရှေးခယျြခနျ့အပျရမညျ။
ပုဒျမ (၂၄)။ ။ အမြိုးသား ကိုယျပိုငျအုပျခြုပျရေး ဒသေမြား၏ ကိုယျပိုငျအုပျခြုပျရေးအစိုးရ အဖှဲ့အစညျးမြားသညျ နိုငျငံတျော၏ စဈဘကျရေးရာ စနဈမြားနှငျ့ ဒသေ၏ လကျတှလေို့အပျခကျြအရ နိုငျငံတျောကောငျစီ၏ အတညျပွုခကျြကို ရယူပွီး အမြားပွညျ သူငွိမျဝပျ ပိပွားရေး ထိနျးသိမျးစောငျ့ရှောကျရနျ အတှကျ ဒသေန်တရ ပွညျသူ့လုံခွုံရေး တပျဖှဲ့မြားကို ဖှဲ့စညျးနိုငျသညျ။
ပုဒျမ (၃၀) ။ ။ အမြိုးသား ကိုယျပိုငျအုပျခြုပျရေး နယျမွမြေား၏ ရငှနှေငျ့ သုံးငှမြေားကို ၎င်းငျးနယျမွမြေားအား အထူးအခှငျ့ အရေး ပေးမှု မူအရ နိုငျငံတျော ကောငျစီက တိတိကကြ သတျမှတျပေးရမညျ။
အမြိုးသားကိုယျပိုငျအုပျခြုပျရေး နယျမွတေခုတညျး နိုငျငံတျော၏စညျးကမျးသတျမှတျခကျြမြား နှငျ့အညီ မိမိ၏ ဘတျဂကျြထဲမှ အသုံးစရိတျကငှေအေတှကျ အရံ ရနျပုံငှေ ဖယျထားရမညျ။ ၎င်းငျးဘတျဂကျြထဲမှ အရံရနျပုံငှေ အခြိုးအစားသညျ တခွားဒသေ၏ ဘတျဂကျြမြားထဲမှ အရံရနျပုံငှေ အခြိုးအစားထကျ ပိုမွှငျ့၍ ပေးရမညျ။
ပုဒျမ (၃၇)။ ။ လူနညျးစု အမြိုးသား ကြောငျးသား အမြားဆုံးရှိသညျ့ ကြောငျးမြားတှငျ ဖွဈနိုငျသမြှ အခါတိုငျး ၊၎င်းငျးတို့၏ မိခငျဘာသာစကားသုံး ကြောငျးသင်ျခဏျးစာအုပျမြားကို အသုံးပွုသငျ့သညျ။ သငျကွားရေး ကွားခံအဖွဈလညျး ဤဘာသာစကားကို သုံး စှဲစသေငျ့သညျ။ တရုတျ (ဟနျဘာသာစကား) သငျတနျးမြားကို မူလတနျး အတနျးမြိုးမြား သို့မဟုတျ အထကျတနျးမြား အတှကျ ပကေငျြး အသံထှကျပျေါတှငျ အခွခေံထားသညျ့ အမြားသုံးစကား ဖူထုံးဝှါ ပြံ့နှံစရေနျ သငျကွားပေးရမညျ။
ပုဒျမ (၄၉) ။ ။ အမြိုးသား ကိုယျပိုငျအုပျခြုပျရေးနယျမွမြေားရှိ နိုငျငံဝနျထမျးမြားကို ဒသေအတှငျး အမြားသုံး အပွော သို့မဟုတျ အရေးဘာသာ စကားနှဈမြိုး သို့မဟုတျ နှဈမြိုးထကျပိုမို၍ ကြှမျးကငျြတတျမွောကျပါက ဆုခြီးမွှငျ့ ပေးအပျရမညျ။
ပုဒျမ (၆၅) ။ ။ နိုငျငံတျောက လူမြိုးစု တက်ကသိုလျမြားကို ထူထောငျရမညျ။ အခွား အဆငျ့မွငျ့ပညာရေး တက်ကသိုလျမြားတှငျ လညျး လူနညျးစု အမြိုးသား ကြောငျးသားမြားကိုသာ လကျခံသော ၊ လူမြိုးစု အဓိကထားသော သငျတနျးမြားနှငျ့ ကြောငျးဝငျ ခှငျ့ အကွိုသငျတနျးမြားကို တညျထောငျပေးရမညျ။
-ဦးစားပေး ကြောငျးဝငျခှငျ့နှငျ့ ဦးစားပေး အလုပျခနျ့ အပျခွငျး စနဈမြားကိုလညျး ခမြှတျနိုငျသညျ။ ကြောငျးဝငျလကျခံရာတှငျ အဆငျ့မွငျ့ ပညာရေး တက်ကသိုလျမြားနှငျ့ စကျမှုအထကျတနျးကြောငျးမြားက လူနညျးစု အမြိုးသားကြောငျးသားမြားအတှကျ ကြောငျးဝငျခှငျ့ စံနှုနျးနှငျ့ အရညျအခငျြး သတျမှတျခကျြတို့ကို သငျ့တျောစှာ နှိမျ့ခပြေးရမညျ။
- ဟူ၍ ပွဌာနျးထားခကျြမြားကို တှရှေိ့ရပါသညျ။
တခွားနိုငျငံ၏ ဖှဲ့စညျးအုပျခြုပျပုံစနဈ၌ တဈပွညျထောငျစုတှငျပငျလြှငျ အထကျပါအခှငျ့အရေးမြားကို လူမြိုးစုမြားအတှကျ ပေးအပျ ပွဌာနျးထားသညျကိုတှရေ့ပါသညျ။ ပွညျထောငျစုစနဈကိုသှားမညျ့ မွနျမာနိုငျငံအနဖွေငျ့ဆိုပါမူ ထိုထကျပငျ ပိုမိုပွညျ့စုံရနျ လိုအပျမညျ ဖွဈပါသညျ။ ယခုမွနျမာနိုငျငံ၏ ၂၀၀၈ ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံဥပဒေတှေငျ ” ကိုယျပိုငျအုပျခြုပျခှငျ့ရ တိုငျးနှငျ့ဒသေမြား” အတှကျ အမြိုးသား ကိုယျပိုငျအုပျခြုပျခှငျ့ အခှငျ့အရေးလောကျကိုပငျလြှငျ ဘာတဈခုမှ ပေးအပျပွဌာနျးထားခွငျးမရှိသညျကို အပှငျ့လငျးဆုံး တှမွေ့ငျ နရေပါသညျ။ တိုငျးရငျးသားလူမြိုးပေါငျးစုံ ပွညျသူမြား နှိုငျးယှဉျလလေ့ာနိုငျပါရနျ တငျပွခွငျးသာဖွဈပါ သညျ။ နိုငျငံလှတျလပျရေးကို အရယူနိုငျခဲ့သော လူမြိုးပေါငျးစုံပွညျသူမြားအနဖွေငျ့ လှတျလပျရေးနှငျ့အတူ တောငျးဆိုခဲ့သညျ့ ကိုယျကွမ်မာကိုယျ ဖနျးတီးခှငျ့ ၊ ကိုယျပိုငျးပွဌာနျးခှငျ့ အခှငျ့အရေး လုံးဝ (လုံးဝ) ပြောကျဆုံးနပေါသညျ။ ဝေးသော – သာ၍ဝေး သော – ဟိုတဈဖကျကမျးမှာ – ဟုသာ ထငျမှတျရပါတော့မညျ။ နိုးနိုးကွားကွား ရှိရနျလိုပါသညျ။
ဦးမြိုး ( ဥပဒေ)
Burma: Burma Army ransacks church in Bhamo district
at 3/27/2012 07:32:00 AM
Sin Lum Pang Mu church
According to Reverend Jangmaw Gam Maw, pastor of Pang Mu Church, soldiers from the 33rd battalion of the Burma Army’s 88th Infantry Division burned bibles, destroyed church property, and stoleavideo player, loudspeakers and villagers’ belongings. The soldiers claimed that the property belonged toaKachin Independence Army outpost. They also took money from the church donation boxes.
The pastor and over 1,000 church members from Pang Mu village had abandoned the village for Mai Ja Yang IDP camp on 19 November 2011.
On 10 March, Burma Army soldiers disruptedaChristian conference and threatenedaMember of Parliament (MP) at gunpoint in western Burma’s Chin State, according to the Chin Human Rights Organization (CHRO).
Read More+++click on+++++
Mung Masa sumtsaw (IV )
at 3/27/2012 07:29:00 AM
Shanglawt Tsing gaw, Shawnglam Share Ninghkring ni lusha garut hkra hkra, Myu hte Mungdanamatu shakut nga ai hpe chyu majen nna, Maroi nni masin n si ai hte, lusha gam akyu hpyi lawm ai; shat mung jum hte sha, sha yu ai; lani mi hkying hkum4sha yup yu ai rai yang, hkamjan lu ai majaw, grai n-gun lu nga ai raitim, shani shagu Ga shagawp n lu gawp mat na tsang ai majaw lusha man man sha, man man yup rai bai shakut taw nga sai. 25 ya shana gaw yuptungeph. shang wa ai,"Daina Laiza hpe atsai nat kau sana re da; MKA kaw tsun garu nga ma ai" da law! Hkum rai mayu,Shanglawt Tsing ni woi mun rawng pyi n ngu kau ya ai rai sa. Grau pyi she yup paw. Daini na Ga shagawp gaw, Mungmasa Sumtsaw matut re yaw.
JIC : Read more+++click
UN ni hpyen yen tsin yam ni hpang de du
at 3/27/2012 07:27:00 AM
Anhte lusha gam akyu hpyi shagu, KK madat ya ai.Kyu hpyi ding yang rai ga
at 3/26/2012 08:01:00 AM
Myit rum manang ni
Majan shiga chyeju shakawn ga...... da. Anhte lusha gam akyu hpyi shagu, KK madat ya ai. Tai ni gaw Yama lu nna n yup hkra hkra KIA hkam da ai bawm hkan tsan nna, maga lahkawng KIA hpe matep gasat ai ladat lang ma ai da.Raitim Tai ni maga de mung laja lana machyi hkala ai; Tsit Chyawng Mhu du hkra hkrat sum ai shiga, Byimwa(Sinlum maga) de na na lu ai. AnhteaShare ninghkring ni gaw shata 9-10, na hkra masha galai la hkat ai lam mung n nga, lusha n grung, kade she pu ba raitim, nde mi hkam jan lu ai gaw KKachyeju san san she rai sai. Mungkan ting kaw na myusha ni mung kyu hpyi dum ai lam shiga ni n-gun mi alu shana wa ma ai. Grai n-gun lu ai. Share ninghkring niamatu matut akyu hpyi ga i.KK bau sin u ga.
JIC: read more+++
ကချင်မှာ ဘာကြောင့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ မကျင်းပနိုင်ရသလဲ
at 3/26/2012 04:59:00 AM
ကချင်ပြည်နယ်က ဖားကန့် မိုးကောင်း ဗန်းမော် မဲဆန္ဒနယ် ၃ ခုကို လုံခြုံရေးမကောင်းတဲ့အတွက် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရန် အခြေအနေမရှိတဲ့အကြောင်း ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ဗြုံးစား ကြေညာလိုက်တယ်။ ဒါကြောင့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ လစ်လပ်တဲ့ အမတ်နေရာ ၄၅ နေရာသာ ကျန်တော့တယ်။ တနည်းပြောရရင် ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာ ကြားဖြတ်အတွက် နေရာ ၄၀ လစ်လပ်နေရာကနေ ခု ၃၇ နေရာသာ ကျန်တော့တယ်ဆိုတဲ့ သဘောဖြစ်တယ်။
လုံခြုံရေးမကောင်းဘူးလို့ အစိုးရကပြောပေမဲ့ ကေအိုင်အေကတော့ ကချင် မဲဆန္ဒနယ် ၃ နယ်မှာ ဘာမှလုံခြုံရေးပြဿနာမရှိဘူးလို့ပြောတယ်။ ဘယ်သူတွေဘယ်လိုပြောပြော လုံခြုံရေးမကောင်းဘူးဆိုတာကို ကောင်းပါတယ်ပြောဖို့ သက်သေပြဖို့ ကေအိုင်အေလဲ မတတ်နိုင်ပါ။ ကေအိုင်အေက လုံခြုံရေးကောင်းတယ်ဆိုရင် ခုချက်ခြင်း ဦးသိန်းစိန်အစိုးရက ဗုံးပေါက်ပြနိုင်တာမို့ မဟုတ်မှန်းသိသိနဲ့ ခံကြရမှာဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ ဘာကြောင့် အကောက်ကြံသလဲ ဆန်းစစ်ကြည့်သင့်တယ်။
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမလုပ်နိုင်တဲ့ နယ်မြေတွေကို လေ့လာကြည့်ရင် လစ်လပ်နေရာအားလုံး ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာသာ ဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံရေးရှုထောင့်ကကြည့်ရင် ကချင်ပြည်နယ်ဟာ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရအတွက် လောလောဆည် ဆူးညောင့်ဖြစ်နေပါတယ်။ ကေအိုင်အေကို အစိုးရလိုချင်သလို ပုံသွင်းကြိုးကိုင်လို့ မရတဲ့အတွက် ဘာလုံခြုံရေးပြဿနာမှ မရှိတဲ့ ကချင်မဲဆန္ဒနယ် ၃ ခုကို ကြားဖြတ်ရွေကောက်ပွဲ ကျင်းပခွင့်ပိတ်ပြီး ကေအိုင်အေကို ဒဏ်ခတ်ဘို့ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရက တွက်ချက် ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပုံရပါတယ်။
ဒေါက်တာတူးဂျာက မိုးကောင်းကနေ တသီးပုဂ္ဂလအမတ်လောင်းအဖြစ် ယှဉ်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါက်တာတူးဂျာဟာ ဘာနာမယ်နဲ့ ပါတီဖွဲ့ဖွဲ့ စင်စစ် ကေအိုင်အေနဲ့ ဆက်စပ်တယ်ဆိုတာ အများအသိဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် ကေအိုင်အေကို ဒဏ်ခတ်ဘို့ဆိုရင် လွှတ်တော်နိုင်ငံရေးကို အာသာငမ်းငမ်း ၀င်ချင်နေတဲ့ ဒေါက်တာတူးဂျာကို ရွေးကောက်ပွဲမ၀င်နိုင်အောင် ဒဏ်ခတ်မှဖြစ်မယ်။ ဒေါက်တာတူးဂျာကို ရွေးကောက်ပွဲမ၀င်နိုင်အောင် ဒဏ်ခတ်ဘို့အတွက် သူပြိုင်မဲ့ မိုးကောင်းမဲဆန္ဒနယ်ကို ပိတ်နိုင်ဘို့ အစိုးရက အကောက်ကြံရမှာဖြစ်တယ်။
ဒီနေရာမှာ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က တူးဂျာကို တသီးပုဂ္ဂလအမတ်လောင်း ၀င်ခွင့်မပေးရင် မဖြစ်ဘူးလားလို့ မေးစရာရှိပါတယ်။၂၀၁၀ မတိုင်တုံးက နိုင်ငံရေးအခြေအနေက စစ်အစိုးရစိတ်ကြိုက် လုပ်ချင်သလို လုပ်ခွင့်ရထားတာမို့ တူးဂျာတို့ပါတီကို နယ်ခြားစောင့်တပ်နဲ့ အလဲအလှယ်လုပ်မရတဲ့အဆုံး ခိုင်မာတဲ့အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲ ပါတီထောင်ခွင့် ပိတ်ခဲ့တယ်။ တခါ တသီးပုဂ္ဂလအမတ်လောင်းလျှောက်တော့လဲ အကြောင်းပြချက်မရှိပဲ တူးဂျာကို ပယ်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။ အဲဒီတုံးကလဲ အောင်သောင်းဦးစီးပြီး အကောက်ကြံခဲ့တာ ဖြစ်တယ်။
ခုကျတော့ နိုင်ငံတကာ အထူးသဖြင့် အမေရိကန်က ကချင်အပေါ် အာရုံစိုက်နေချိန်ဖြစ်တယ်။ ဒေါ်စုကြောင့် အစိုးရမှာ လဲဂျီင်္တီမေစီ ရနေချိန်ဖြစ်တယ်။ အာဆီယံဥက္ကဌအတွက် သိက္ခာတက်အောင် နည်းမျိုးစုံနဲ့ ကြိုးပမ်းနေချိန်ဖြစ်တယ်။ ကချင်ပြည်တွင်းစစ် အရေးအခင်းကလဲ နိုင်ငံတကာသိဖြစ်နေတယ်။
ဒါကြောင့် တူးဂျာကို တသီးပုဂ္ဂလအမတ်လောင်း လျှောက်တာ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ပယ်ချရင် ပေါ်တင်ဖြစ်နေမယ်။ လက်စားချေတယ်ဆိုတာ သိပ်ကိုထင်ရှားပြီး အများအာရုံစိုက်စရာဖြစ်မယ်။ ဒီမှာတင် မိုးကောင်းမဲဆန္ဒနယ်ကို လုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်နဲ့ ကြားဖြတ်မကျင်းပဖြစ်ကြောင်း ကြေငြာရင် တူးဂျာပါ အလိုလို သတ်ပြီးဖြစ်မယ်။ နိုင်ငံရေးထဲ သိပ်ဝင်ချင်နေတဲ့ ကေအိုင်အိုကို နိုင်ငံရေးက ပထုတ်ပြီး မခံချင်အောင်လုပ်တဲ့သဘောပဲ။
မိုးကောင်းတခုထဲကွက်ပီး ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမလုပ်ရင် အမြင်မလှတဲ့အတွက် ဖားကန့်နဲ့ ဗန်းမော်ပါထဲ့မှ ကချင်ကေအိုင်အေကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲ မလုပ်နိုင်သလိုလို အပြစ်တင်ဖို့ အကွက်ရမယ်။ င်္ဒီမှာတင် ကချင်ပြည်နယ်က မဲဆန္ဒနယ် ၃ ခုလုံးကို လုံခြုံရေးမကောင်းဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ အစိုးရက ဖျက်လိုက်တာဖြစ်တယ်။
ဒီနေရာမှာ ကချင်ပြည်နယ်က မဲဆန္ဒနယ် ၃ ခုလုံးမှာ ကြံ့ဖွံ့ပါတီက အမတ်လောင်း ၃ ဦးပါ ပါနေတဲ့အတွက် ကိုယ့်ဘက်က ဘယ်လောက်အထိနာမလဲပါ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရကတွက်မှာဖြစ်တယ်။ တကယ်တော့ လစ်လပ်နေရာ ၄၈ နေရာလုံးမပြိုင်လဲ ကြံ့ဖွံက လွှတ်တော်မှာ အသာစီးရနေမှာဖြစ်တယ်။ ဒုတ်ိယ ၅ နှစ်သက်တမ်းအတွက် ရည်စူးလို့သာ နိုင်ထားတဲ့ မဲဆန္ဒနယ်တွေ လက်မလွတ်အောင် ခုလို သူ့အမတ်လောင်းတွေ ပြိုင်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်။
တူးဂျာနဲ့ ကေအိုင်အေကို ပညာပေးဖို့အတွက် ကချင်ပြည်နယ်က မဲဆန္ဒနယ် ၃ ခုလုံး မကျင်းပတဲ့အတွက် ဆွမ်းခံရင်း ငှက်သင့်တာ အန်အယ်ဒီဖြစ်တယ်။ ကချင်ပြည်နယ်က မဲဆန္ဒနယ် ၃ ခုလုံးမှာ အန်အယ်ဒီက ၀င်ပြိုင်တဲ့အတွက် အမတ်လောင်း ၃ ဦး မပြိုင်ရပဲ ဆုံးရှုံးသွားတယ်။ အမေရိကန်မှာ သွားပီးအာချောင်တဲ့ NDF ပါတီ ဒေါ်ဘောက်ဂျာကိုပါ အစိုးရက ကြိုက်ပုံမရတဲ့အတွက် သူ့ကိုပါ အလိုလို နိုင်ငံရေးသတ်ပြီးသားဖြစ်သွားမယ်။ ဒါကြောင့် ကချင်ပြည်နယ်က မဲဆန္ဒနယ် ၃ ခုလုံးကို ရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပတဲ့အတွက် အစိုးရဖြစ်စေချင်တာတွေ တချက်ခုတ် ၃ ချက်ပြတ် ကိစ္စပြီင်္းသွားတယ်လို့ ဆိုနိုင်တယ်။
အန်အယ်ဒီဘက်တွက်ရင် ကချင် ၃ နေရာ လက်လွှတ်ရတဲ့ပြင် စစ်ကိုင်း (၇) က ဦးစောလှိုင်ကိုပါ ကော်မရှင်က ထုတ်ထားတဲ့အတွက် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ အန်အယ်ဒီက ၄ နာရီ လွတ်သွားတယ်။ တနည်းပြောရရင် စုစုပေါင်း လစ်လပ်နေရာ ၄၈ နေရာရဲ့ ၈% ကို မပြိုင်ရဘဲ လက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့သဘောဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ အမတ်ဖြစ်ပြီးသား မြတ်ဥာဏစိုးကို အချောင်ရတဲ့အတွက် ၃နေရာသာ ဆုံးရှုံးတယ်လို့ ကြံဖန်ပြောရင်လဲရတယ်။
လစ်လပ်နေရာ ၄၈ နေရာလုံး ၀င်ပြိုင်နိုင်တာ ကြံ့ဖွံနဲ့အန်အယ်ဒီသာရှိတာမို့ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့တွက်ရင် အမတ်နေရာနည်းနည်းသာပြိုင်နိုင်တဲ့ပါတီတွေ ဥပမာ NDF တို့ NUP တစညတို့လို ပါတီတွေအဘို့ ကချင်မှာ ဆုံးရှုံးမှု ပိုကြီးမားတာ သေချာနေတယ်။
ဒါကြံ့ဖွံပါတီဘက်က ညစ်ကွက်တခုသာဖြစ်တယ်။ နောက်ထပ်လာစရာတွေ အများကြီး မှန်းထားသင့်တယ်။ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပနိုင်တဲ့ ကျေးရွာအုပ်စုပေါင်း ကချင်ပြည်နယ်မှာ ၈၉ အုပ်စုရှိတယ်။ ၂၀၁၂ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမလုပ်နိုင်တဲ့ ကချင်ပြည်နယ်က ကျေးရွာအုပ်စုစာရင်းကိုတော့ ကော်မရှင်က ခုထိ မထုတ်ပြန်သေးပါ။
၂၀၁၀ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ လုံခြုံရေးကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပနိုင်တဲ့ မဲဆန္ဒနယ်တွေ ရှိတယ်လို့ ကြေငြာရတာကိုက အစိုးရအဖို့ နိုင်ငံရေး တပန်းရှုံးတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးစကား ဘယ်လောက်ကြီးပြောနေနေ ပြည်တွင်းစစ်ရှိနေတယ်ဆိုတာ ၀န်ခံရာရောက်တယ်။ တကဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ အလှမ်းဝေးနေဆဲဖြစ်တယ်ဆိုတာ ပြသရာရောက်တယ်။
၂၀၁၀ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ လုံခြုံရေးကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပနိုင်တဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်တွေကတော့-
-ကချင်ပြည်နယ်မှာ အင်ဂျန်းယန် ၂ နဲ့ ဆွမ်ပရာဘွမ် ၂ တို့ဖြစ်တယ်။
-ရှမ်းပြည်နယ်မှာ မိုင်းလား၊ နားဖန်၊ ပန်ဝိုင်၊ မိုင်းမော၊ ပန်ဆန်း ၅ မြို့နယ်ဖြစ်တယ်။ ထူးခြားချက်က မိုင်းလားမှာ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ် တင်သွင်းသူမရှိဘူးလို့ သိရတယ်။
၂၀၁၀ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ လုံခြုံရေးကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပနိုင်တဲ့ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်တွေကတော့
-ရှမ်းပြည်နယ်မှာ ၁၀ မြို့နယ်ရှိပါတယ်။
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ နဲ့ လုံခြုံရေးအခြေအနေ
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတုံးကလဲ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပဘို့ အခြေအနေမရှိတဲ့ ပြည်နယ်တွေက ကချင် ကယား ရှမ်း မွန်နဲ့ ကရင်ပြည်နယ်တွေ ဖြစ်တယ်။ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ရွေးကောက်ပွဲမလုပ်နိုင်တဲ့ မြို့နယ်တွေက ရှမ်းပြည် ၀နယ်မှာ လေးမြို့နယ်ရှိပါတယ်။ ပန်ဆန်း နားဖန်း ပန်ဝိုင် မိုင်းမော လေးမြိူနယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုလိုတဲ့သဘောက မဲဆန္ဒနယ်တခုလုံး ရွေးကောက်ပွဲ မလုပ်နိုင်တာဆိုလို့ ၀ လေးမြို့နယ်သာ ရှိတယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ် ဖြစ်တယ်။
ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့စာရင်းအရဆိုရင် ရွေးကောက်ပွဲ မလုပ်နိုင်တဲ့ ကျေးရွာအုပ်စုပေါင်းက ကချင်ပြည်နယ်မှာ ၆၈၊ ကယားမှာ ၉ အုပ်စု ရှမ်းပြည်နယ်မှာ ၅၉ အုပ်စု မွန်ပြည်နယ်မှာ ၉ အုပ်စုနဲ့ ကရင်ပြည်နယ်မှာ ၁၅၅ အုပ်စုရှိပါတယ် စုစုပေါင်း ပြည်နယ် ၅ ခုမှာ ရွေးကောက်ပွဲ မလုပ်နိုင်တဲ့ ကျေးရွာအုပ်စု ၃၀၀ ရှိပါတယ်။
ကချင်ပြည်နယ်ကိုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါ ရွေးကောက်ပွဲမလုပ်နိုင်တဲ့ ကျေးရွာအုပ်စုပေါင်း ၆၈ အုပ်စုရှိပါတယ် ၀ိုင်းမော် အင်ဂျန်းယန် ဆော့လော် ချဖွေ တနိုင်း ဆွမ်ပရာဘွမ် မန်စီ မိုးမောက်နဲ့ ရွှေကူ ၉ မြို့နယ်ထဲက ကျေးရွာအုပ်စုတွေပါ ပါဝင်တယ်။
ဒီ ၉ မြို့နယ်ဟာ အထူုးသဖြင့် ကချင်အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ ကေအိုင်အို အုပ်ချုပ်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်တာမို့ ခုလို ရွေးကောက်ပွဲ မလုပ်နိုင်တာလို့ ယူဆတဲ့အကြောင်း ကချင် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးအဖွဲ့တခုဖြစ်တဲ့ ဒီမိုကရေစီသစ်တပ်မတော်-ကချင် NDAK ဥက္ကဌ ဦးဇခုန်တိန့်ယိန်းက ယူဆတယ်။
စစ်အစိုးရ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ကြေငြာထားတဲ့ ကျေးရွာအုပ်စုတွေဟာ ကေအိုင်အို ထိန်းချုပ်တဲ့နယ်မြေတွေလို့ ဦးဇခုန်တိန့်ယိန်းပြောတဲ့အတွက် စစ်အစိုးရ ရွေးကောက်ပွဲတွေကို ကေအိုင်အိုနယ်မြေတွေမှာ လက်မခံဘူးဆိုတဲ့ သဘောလားဆိုတာ မေးခွန်းထုတ်စရာ ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကေအိုင်အိုကတော့ ကချင်ပြည်သူတွေကို ရွေးကောက်ပွဲအတွက် မဲပေးပါလို့ တိုက်တွန်းတာမရှိသလို ကန့်ကွက်ပါလို့လဲ တိုက်တွန်းမထားပါဘုးလို့ ကေအိုင် ဒု နိုင်ငံခြားရေးတာဝန်ခံ ဗိုလ်မှူးကြီးလွန်းဒေါင်းက ထောက်ပြခဲ့တယ်။
ကရင်ပြည်နယ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် ရွေးကောက်ပွဲမလုပ်နိုင်တဲ့ ကျေးရွာအုပ်စုပေါင်း ၁၅၅ ခုရှိပါတယ်။
အဓိကမြို့နယ်တွေက ဖားအံ လှိုင်းဘွဲ့ သံတောင်ကြီး မြ၀တီ ကော့ကရိတ် ကြာအင်းဆိပ်ကြီး ၆ မြိုနယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမြို့နယ်တွေက ကျေးရွာအုပ်စုတွေဟာ ကေအန်ယူ ထ်ိန်းချုပ်တဲ့ နယ်မြေတွေဖြစ်လို့ စစ်အစိုးရဘက်က ရွေးကောက်ပွဲမလုပ်ဘို့ ရှောင်သလား မသိရပေမဲ့ ကေအန်ယူကတော့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို ဆန့်ကျင်တယ်လို့ အမည်မဖော်လိုတဲ့ ကေအန်ယူ တပ်မှူးတဦးက ပြောတယ်။
၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပဖြစ်တဲ့ နယ်မြေတွေ
၉၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲကို ပြန်ကြည့်ရင် ရှမ်းပြည်နယ် ၆ မြို့နယ်ဖြစ်တဲ့ ကုန်းကြမ်း။ နားဖန် ပန်ဝိုင် ပန်ယန်း မိုင်းမောနဲ့ မန့်ဖန် မြို့နယ်တွေမှာ ရွေးကောက်ပွဲမလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး- သဘောကတော့ ၀ထိန်းချုပ်တဲ့ နယ်မြေအတော်များများမှာ ရွေးကောက်ပွဲမလုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီအချိန်ပြန်ကြည့်ရင် ၁၉၈၉ မှာ ဗပက ပြိဲုကွဲပီး ၀နဲ့ကိုးကန့်စတဲ့ လက်နက်ကိုင်တွေ ခွဲထွက်ပီး တစင်ထောင်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ ကချင်ပြည်နယ် အင်ဂျန်းယန်မြို့နယ်မှာလဲ ရွေးကောက်ပွဲ မလုပ်နိုင်ခဲ့တာ တွေ့ရပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲပီး အနှစ် ၂၀ကျော်တဲ့အချိန် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာလဲ ၀နယ်က လေးမြို့နယ်မှာ ရွေးကောက်ပွဲမလုပ်နိုင်ဖြစ်ပြန်ပါတယ်။ ဒီထဲမှာ နားဖန်း ပန်ဝိုင် မိုင်းမော် ၃ မြို့နယ်ဟာ ၉၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲတုံးကလဲ ရွေးကောက်ပွဲ မလုပ်နိုင်တဲ့ နယ်မြေတွေ ဖြစ်နေတာ တွေ့ရပါတယ်။
ချုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲမလုပ်နိုင်တဲ့ ကျေးရွာအုပ်စုပေါင်း ၃၀၀ ဆိုတာ နည်းတဲ့ ကိန်းဂဏန်းမဟုတ်တဲ့အတွက် ရွေးကောက်ပွဲနောက်ကွယ်မှာ စစ်အစိုးရဘက်က နိုင်ငံရေးပြေလည်အောင် မကိုင်နိုင်တာကို မီးမောင်းထိုးပြနေသလို ဖြစ်နေတယ်။ တနည်းပြောရရင် ၉၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်လုပ်ပီး အနှစ် ၂၀ကျော်ကြာတဲ့ အချိန် နောက်ရွေးကောက်ပွဲမှာ ရွေးကောက်ပွဲမလုပ်နိုင်တဲ့ ကျေးရွာအုပ်စုပေါင်း ၃၀၀ တိုးလာတဲ့သဘော ဖြစ်နေပါတယ်။
၀အုပ်ချုပ်တဲ့ လေးမြို့နယ်မှာ ရွေးကောက်ပွဲမလုပ်နိုင်လို့ ရှမ်းပြည်နယ်မှာ မဲဆန္ဒနယ်လျော့သွားရုံမက တိုင်းဒေသကြီးမဲဆန္ဒနယ် အရေအတွက်ပါ လျော့သွားတာမို့ စစ်အစိုးရအဘို့ မျက်နှာပျက်စရာ ဖြစ်သွားတာ မငြင်းနိုင်တဲ့အချက်ပါ။
ပိုဆိုးတဲ့အချက်က ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲမှာ ထည့်သွင်းပြဌာန်းထားတဲ့ ၀ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ၆ မြို့နယ်ထဲက လေးမြိုနယ်မှာ ရွေးကောက်ပွဲမလုပ်နိုင်ရုံမက ကျန် ၂ မြို့နယ်မှာလဲ ရွေးကောက်ပွဲမလုပ်နိုင်တဲ့ ကျေးရွာအုပ်စုတွေရှိပါတယ်လို့ ထပ်မံကြေငြာရတဲ့အတွက် အစိုးရအဘို့ မျက်နှာပျက်စရာဖြစ်ခဲ့တယ်။
အိမ်ပြန်ပါရစေ.March2012- Kachin IDP Video
at 3/26/2012 12:16:00 AM
IDP in Myitkyina, Waimaw, Kachin state, Myanmar
at 3/25/2012 10:54:00 PM
Who will protect us if we surrender to the Burmese? There is no guarantee that our neighbouring countries will protect us. Now is really crucial time for the Kachin people."
Welcome To Free Kachin
M.K.B.A ရဲ့ ကြေငြာချက်
at 3/25/2012 11:45:00 AM
KIA ကို အဆိပ်ငွေ့ဖြင့် တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်''
at 3/25/2012 11:27:00 AM
စနေနေ့၊ မတ်လ 24 ရက် 2012 ခုနှစ် ရွှေဟင်္သာ
မြစ်ကြီးနား ဗန်းမော်ကားလမ်းအနီးက ကန်ဒေါင်ယန် ကျေးရွာနားတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် မတ်လ (၁၉) ရက်နေ့ တိုက်ပွဲ၌ အဆိပ်ငွေ့ ကျည်သုံးခဲ့သည်ဟု ကချင်လွတ်မြောက်တပ်ဖွဲ့ (KIA) ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးလာနန်းက ပြောပါသည်။
ဤ တိုက်ပွဲမတိုင်ခင်ကလည်း မြစ်ကြီးနား ဗန်းမော်သွား လမ်းပေါ်က ကေအိုင်အေ တပ်မဟာ (၅) တောင်ကုန်း စခန်းတခုကို ခမရ ၄၆၀၊ ခမရ ၃၉၀ အစိုးရတပ်များက သိမ်းပိုက်ရန် (၄-၅) ရက် ဆက်တိုက် တိုက်ခိုက်နေခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည်။ ထို့အပြင် မတ်လ (၂၂) ရက်နေ့ မနက်ပိုင်း ( ၇း၃၀) နာရီ မှ (၉း၃၀) နာရီတွင်လည်း ကောက်ဂျန်ကျေးရွာ( ရှမ်းရွာ) ဘက်မှ ဘန်ဒေါင် -ဧဒင်ကျေးရွာဘက်သို့ ရောက်လာသော ခလရ (၃ရ) (၄၀)၊ ခမရ (၃၈၈) ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ များနှင့် ကေအိုင်အေ တပ်မဟာ (၅) တပ်ဖွဲ့ တို့ နန်ဆန်ခနှင့် ဧဒင်ကျေးရွာ ပါတ်ဝန်းကျင်တွင် ပြင်းထန်စွာ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ဆိုပါသည်။
အလားတူ မြစ်ကြီးနား-ဗန်းမော် ကားလမ်းမကြီးအနီးရှိ အင်ပေါင်ကျေးရွာ နှင့် ကန်တော်ယန် ကျေးရွာအကြား တွင် ရောက် ရှိနေသော အစိုးရ ခလရ (၂၆၀), ခမရ (၃၈၉)၊ (၃၉၀) ပူးပေါင်း တပ်ဖွဲ့ များ ကို ကေအိုင်အေ တပ်ရင်း (၂၅၅) မှ တပ်ဖွဲ့များက ၀င်ရောက် တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသည်။
အစိုးရစစ်တပ်သုံး ကျည်ဆံများ(ဓါတ်ပုံ kachin news)
ဤကဲ့သို့ (၅) ရက်ကြာတိုက်ပွဲများ ဆက်တိုက် ပြင်းထန်လာနေခဲ့ရာက ဓါတုအဆိပ်ငွေ့ ကျည်များ အဆက် မပြတ် ပစ်ခတ် လာခဲ့သည်ဟု ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ဆိုပါသည်။
ကေအိုင်အိုသည်၊ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရန် ပြီးခဲ့သည့် မတ်လလည်တုန်းကလည်း နိုင်ငံတော် ငြိမ်းချမ်းရေး ဖေါ်ဆောင်ရေးအဖွဲ့ နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ သို့သော် တပ်နေရာချထားရေး သဘောထားတွင် ညှိနှိုင်း ၍မရသဖြင့် နောက်ထပ်ဆွေးနွေး သွား ရန်ကိုသာ သဘောတူခဲ့ရပါသည်။ ကေအိုင်အေနှင့် အစိုးရတို့သည် ၁၉၉၄ ခုနှစ် ကတည်းက အပစ်အခတ်ရပ်စဲခဲ့ပြီး ဖြစ် သော်လည်း ကေအိုင်အေကို နယ်ခြားစောင့်တပ် အသွင် ပြောင်းခိုင်းရာက ပြီးခဲ့သည့် (၂၀၁၁) ခုနှစ် ဇွန်လတွင် ပြန်လည် တိုက်ခိုက်မှုများ ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။
at 3/25/2012 01:53:00 AM
Rare Earths Kachin ????
at 3/25/2012 01:48:00 AM
Ndai kajai gum hkawng ai Nhprang gaw an hte jing hpaw mungemung pru ai zawn nga na lu ai.
Read more++full story+++click
KIO KAWN MUNG SHAWA HPANG DE N DAU LAIKA
at 3/25/2012 12:28:00 AM
Ndau shabra laika ndai kaw click di hpaw yu ga.
read more++click on+++++
Kyu hpyi shaja ga
at 3/24/2012 08:54:00 AM
Anhte myit masin hpraw san ai daram Tai ni myit magaw ai gaw dan leng la ai. Mungmasa gaman bawngban masu ai she re hka! Mungkan de myawkle madun na matu bawngban masu ai she rai nga malu ai.
Kyu hpyi shaja ga. Shanhte gaw Kachin amyu shamyit masing hta lai kaga masing n nga ai lam dan leng malu ai. Dap dung3de Tai ni lam2maga matep gasat nga ai. Ba3Lagatbumamatu aja awa hpyi na. Ba,1,2,3, 4,5 shara shagu, htu shadut wa nga ai lam na lu ai. Npawn hpe wang da ma ai. Namsanyang, maga de na shiga mahtai garai n na ai; KIA, Laknak shagrung sai, masha n-gun ni mung jat lu sai. Shiga kaja na lu na kyu jawm hpyi ga. Ginjawamatu kyu hpyi ga.Daini na gashagawp, "Iya Kyu Hpyi Ga " ngu ai re.
JIC: Read more+++click
Yehowa sha dang lu na re
at 3/23/2012 11:17:00 AM
Myit rum manang ni ,
Majan shiga grai kahtet kamawt byin nga sai. Grai tsang ra ai shara kaw du taw sai. Yehowa sha dang lu na re . Lusha gam akyu hpyi nga ga ai. Nawku jawng shagu hta, Hpungmasha ni shani shana hpring nga ai. Awng Padangamatu re. Yehowa gaw shiaHpung Shingkang shadan shadawng na re kam sham ai .
JIC Reead more++click full
Yawng Shang lawm n-gun dat lawm aiaakyu ara
at 3/23/2012 09:54:00 AM
Resettled Ethnic Refugees in the U.S. Call for Greater Action to
End Systematic Human Rights Abuses against Ethnic People of Burma
Thanks to all who signed the petition! With the help of the resettled refugee communities from 67 cities in 29 states, we were able to gather nearly 5,000 signatures urging Ambassador Mitchell to use his position as the U.S. Special Representative and Policy Coordinator for Burma to pressure the Burmese regime to stop committing widespread and systematic human rights abuses against ethnic people.
Today, the petition was delivered to Ambassador Mitchell in his office at the U.S. Department of State by Aung Din and Myra Dahgaypaw, Executive Director and Campaign Coordinator respectively for USCB, and Gum San Maung, President of the Kachin National Organization U.S.A. This petition was signed by 8 ethnic nationalities including Chin, Arakan, Kachin, Shan, Karenni, Mon, Burman and Karen.
Click here to read the press release and the letter to Ambassador Mitchell.
"It was heartbreaking to hear their first-hand stories about different kinds of human rights abuses they had to
endure at the hands of the Burmese army. However, they also appreciate the opportunity they have now that
they can speak out for their families, relatives, friends and their other fellow ethnic people, especially in
Kachin state," said Myra Dahgaypaw.
Most of the refugees from Burma that have resettled in the U.S. come from ethnic nationality areas where
Burma's army has systematically used forced labor, forced relocation, extrajudicial killings, sexual violence and
more to control communities and resources for decades. Many of them have lived as an internally displaced
person for years before they reached the refugees camps at the Thailand-Burma border. Many of them lost
their loved ones due to civil war.
This petition raised legitimate concern that while the main focus of international diplomatic efforts has been
on some limited reforms affecting central Burma, insufficient attention is being paid to developments in ethnic areas.Widespread human rights abuses still continue on regular basis at the armed conflict areas.
In the absence of armed conflict, there are abuses related to forced labor, forced relocation and land confiscation.
The current ceasefires do not create peace for ethnic civilians. They do not guarantee safety for civilians.
Read this report on how forced labor, torture and military activity are still happening in Karen State. Attacks in
Kachin areas has been going on for over nine months, and has forced 75,000 people to flee their homes.
For more details on Kachin situation,
read "Untold Miseries" Wartime Abuses and Forced Displacement in Burma's Kachin State,
Read more+++PDF file++click on++++
Kachin refugees in Burma struggle for independence...
Kachin Independence Organizatiion's War against Dr...
Burma: Burma Army ransacks church in Bhamo distric...
Anhte lusha gam akyu hpyi shagu, KK madat ya ai.Ky...
ကချင်မှာ ဘာကြောင့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ မကျင်းပနို...
Lawt ra sai
Witness အဖွဲ့ မှ စီစဉ် ထုတ်လုပ်သော ဗီဒီယို ရိုက်ကူ...
Dai Wa I Myu Tsaw
၂၀၀၈ဘောင်ထဲ က ထာဝရ ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုရင်တော့
Aung San Suu Kyi campaign speech (VIDEO 13:45 ) cl...
Vote NLD Campaign ဗွီဒီယို ကို ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားပါ...
Chyeju Kaba-Kyu hpyi naw shakut ding yang rai ga y...
URGENT ALERT - ARREST OF REFUGEES IN Alor Setar (M...
မြစ်ဆုံဆည် စီမံကိန်းကို ရပ်ဆိုင်းဖို့ ၈၈ မျိုးဆက် ...
US to provide $1.5 million for Kachin IDPs
Impact of Chinese economic influence and Kachin po...
Ko Mya Aye 88' GS voice ( Malizupamatu myen gums...
၀န်ကြီးဌာနများရဲ့ ဆုံးရှုံးမှု၊ မသမာမှု၊ လိမ်လည်မှ...
မစ်ဆုံ စီမံကိန်း ပြန်စဖို့ ဆွေးနွေးနေကြောင်း တရုတ်...
KIO Dat Kasa Hpung ni hte Myen Mung Asuya Dat Kasa...
KIO HTE MYEN ASUYA KASA NI MASUM YA NGU NA BAWNGBA...
KIO HTE MYEN ASUYA LAPRAN MUNGMASA BAWNGBAN GAMUNG...
ဗိုလ်ချုပ် ဂွမ်မော်က ဆက်လက် ရှင်းပြ
Salang gaba Lanan (KIO ningtau amu madu) 3/9/2012
KIO/ KIA နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲ
n-dai video clip hta lawm ai ga si ni
KYU HPYI SHIGA
Kyu Hpyi karum nga ga.
မြစ်ဆုံ ဆည် လှို့ ဝှက် တည်ဆောက်နေမှု
ဖားကန့်တွင် တရုတ် ကျောထောက်နောက်ခံ ကုမ္ပဏီများ ကျော...
MYU A BUNGHKU, SUBADAR MAJI TU SHARE KANGKA, JINGH...
ဇီဝအဆိပ်နှင့်ဓါတုအဆိပ်အန္တရာယ် ( chye na da ra ai l...
62 LANG NA JINGHPAW WUNPAWNG CHYUM HKAWLIK JAWNG...
Daw jau u
bawngban chyai na lam nnga
Messages from SSSNY 11th SJEP students (Kachin Ver...
Grai lahpawt ai.
Jan L.Bawk Ja hte Texas USA ,JLH kawn san htai gal...